यात्राका ........सुस्केराहरु: 2013
यस्तै निरन्तरको भय मुर्दाबाद ।
म बाँचिरहेको समय मुर्दाबाद ।
माथि देउताको जुलुश निस्कियो ।
मान्छेले गरेका प्रलय मुर्दाबाद ।
उनी मुस्काइन म गम्दै गम्दै हिंडे ।
मन पगाल्ने तिम्रो आसय मुर्दाबाद ।
लाखौंले हारेर एकले जित्छ भने ।
क्रान्ति मुर्दाबाद विजय मुर्दाबाद ।
प्यासीको तिर्खा मेटाउन नसक्ने ।
खोला ,पधेँरा ,जलाशय मुर्दाबाद ।
Posted by दिनेश राज at 22:58
उमेरसँगै म मा सरेका हुन दुख त ।
हजुरबा, बुबाले गरेका हुन दुख त ।
भाग्य त्यो एकातिर अर्को मेरो पौरख ।
साँढेको जुधाइमा परेका हुन दुख त ।
ढलाउन मलाई तिम्रो भगवानले ।
पाइला पाइलामा छरेका हुन दुख त ।
बेइमान त तिमी होलाऊ ऊ नि होला ।
समुन्द्र सँगसँगै तरेका हुन दुख त ।
दिनेशलाई दिनेश बनाउँछु भन्दै ।
मलाई खोज्दै धर्ती झरेका हुन दुख त ।
Posted by दिनेश राज at 22:22
केहीले जवाफ पाउँछन
यो जिन्दगी र
यी पहाड ,
अग्लो मान्दिन म ।
यो तराइ सम्म मान्दिन ।
कुहिरो धुमिल मान्दिन ,
आँखाको के भर छ र ?
कुनै पनि बेला ठग्न सक्छन ।
जमाना फेरियो ,
बिहानै एकहुल कौवाहरु ,
कराउँदै थिए रेडियोतिर ,
म कोदाली बोकेर ,
कुलो लगाउन हिंडे ।
असार १५ लाई अब १ महिना छ ।
मसँग जीवन थियो ,
जीवन दिएँ ,
अरुसँग चलाखी थियो ,
लगानी थियो । त्यहि दिए ।
र त्यही लिदैछन ।
यस्तो पो रहेछ क्रान्ति ।
हिलाम्य आँगनबाट ,
पिढींमा उक्लन्छौ ।
तिम्रा पैतालाले ,
मेरा पिढीं भर फूल छर्छन ।
खुल्ला झ्याल ,
भद्रगोल कोठा ,
चिन्ह राखेर छोडिएका किताबहरु ,
केही खालि पानाहरु,
बिर्को खुलै पेनहरु बताइरहेछन ,
म हराएको , धेरै भएछ ।
Posted by दिनेश राज at 19:07
रातमा निदाउने पनि छन ।
सिरानी भिजाउने पनि छन ।
टुटेर मन रुनेहरुमा यहाँ ।
रुमाल सिलाउने पनि छन ।
मलाई बिहानीको चाह छैन ।
साँझमा पिलाउने पनि छन ।
जसमा बाँचेको छ याद उन्को
फूलकेही बिझाउने पनि छन ।
उमेर ढल्केहुन्थ्यो सुस्त सँग।
बिचैमा बिलाउने पनि छन ।
Posted by दिनेश राज at 23:58
तिमी पनि धर्तिमा आऊ अनि कुरो हुन्छ ।
दैवीशक्तिको फूर्ति नलाऊ अनि कुरो हुन्छ ।
परिवारसँग बसेर प्रवासीमाथि हाँस्नेहरु ।
मैले जति पसिना बगाऊ अनि कुरो हुन्छ ।
हो ठीक मेरा गजल सब बकवास हुन् ।
तिमी राम्रो लेखेर देखाऊ अनि कुरो हुन्छ ।
भो –भो मेरा नाम नजोड्नु मायालुमा ।
कि यादमा कि निंदमा आऊ अनि कुरो हुन्छ ।
फेरि आयौ तिमी मलाई सम्झाउन यार ?
मलाई एकछिन भुलेर जाऊ अनि कुरो हुन्छ ।
Posted by दिनेश राज at 22:40
जो अरुका लागि बग्छन ती हुन आँसु ।
आफ्नो लागि बगे नौटंकी हुन आँसु ।
तिम्ले चाहेर कहाँ आउँछ तिम्रा लागि
मनले बाँध्न नसक्ने परिधी हुन् आँसु ।
छोरा सम्झेर भक्कानिदैँछिन यौटी आमा ।
हेर , सम्झ यी हुन् आँसु यी हुन आँसु ।
खोज्न सपना परदेसिएँ जहिले देखि ।
सोच्छु सधैं कति हुन कति हुन आँसु ।
Posted by दिनेश राज at 23:10
दुश्मनहरुसँग संगत कम छ ।
त्यसैले बाँच्ने हिम्मत कम छ ।
सब दरिद्रहरु राजनीतिमा जाऊ ।
व्यवसाय हो लागत कम छ ।
सुन्छु समाचार अनि शब्दकोश हेर्छु ।
आज सहभागिता बृहत कम छ ।
चारजनाको भेलाले निर्णय गर्छ ।
सहमती हुन्छ सहमत कम छ ।
हरेक वर्षाले मुटु हल्लाउँछ मेरो ।
समस्या घर छोप्ने छत कम छ ।
दिनेशलाई बहरमा लेख्नेहरु भन्छन।
गजल ठीक छ यस्मा इज्जत कम छ ।
Posted by दिनेश राज at 01:24
सधैं भइरह्यो दोमन ,हुन्छ कि हुन्न ?
क्रान्ती पछि परिबर्तन हुन्छ कि हुन्न ?
बिर्से शहिदलाई सहिद बनाउनेले ।
साँच्चै मृत्युपछि जीवन हुन्छ कि हुन्न ?
वर्षौं त्यही छु जहाँ वर्षौं देखि थिएँ ।
महासय यो प्रतिगमन हुन्छ कि हुन्न ?
गरिबको जे-जे थियो सब खायौ सक्यौ ।
सर्कार तिम्लाई अमन हुन्छ कि हुन्न ?
Posted by दिनेश राज at 02:35